Kudzosera: Maitirwo eAmazon Anoshanda Sei uye Anotora Nguva Yakareba Sei | Martech Zone
Muvhuro, Kukadzi 15, 2016 China, Kukadzi 18, 2016 Douglas Karr
Amazon yakashuma kuti vatengesi vanotengesa pamusika wayo vakaverengera 45% yemayuniti akatengeswa mukota yechipiri ya2015, kubva ku41% gore rapfuura. Nemamiriyoni evatengesi vachitengesa mabhiriyoni ezvigadzirwa mune yekutengesa saiti seAmazon, vatengesi vanobatsirwa nekugadzirisa mitengo yavo kuti vese vari vaviri vanokwikwidza uye vachiri kugona kuwana purofiti. Kudzora ndiyo zano rekushandisa mutengo kuti uwane kuwedzera kwekutengesa.
Chii chinonzi automated repricing?
Sezvo nehurongwa hwakawanda, hazvo, zvakaoma kuunganidza iyo data inodiwa kuyambuka gomo rezvigadzirwa uye wozowedzera kana kudzikisa mitengo maererano nekuchinja-chinja pakati pevanokwikwidza. Zvoga zvadzoreredza maturusi yakabuda sekudyara kukuru kune vatengesi kuti vagadzire mitemo yavo uye vobvumidza iyo system kugadzirisa mitengo sezviri kudikanwa.
RepricerExpress ndeimwe yeaya maturusi, uye ivo vakaratidza kuti maAmazon Repricing Anoshanda Sei uye Yakareba Sei Zvinotora.
Kudzora kunotanga kana mumwe wevatengesi vepamusoro makumi maviri echinhu chaicho achinja mutengo wavo unoshanda, kubata nguva, mutengo wekutumira, uye kupa.
Amazon inotumira meseji kuRepricerExpress nemutengo, kutumira uye mutengesi ruzivo rwevatengesi vepamusoro makumi maviri.
RepricerExpress inoongorora iyo yepamusoro makumi maviri mutengesi ruzivo uye inomhanyisa yako repricing pamusoro pavo, kuverenga mutengo wako mutsva.
RepricerExpress inoita macheki pamutengo mutsva kuona kuti iri mukati meako mashoma (pasi) uye yakakwira (siringi) kukosha.
Pane imwe nguva yakasimbiswa, RepricerExpress inoisa iyo nyowani mutengo kuAmazon yekugadzirisa.
Amazon's Mitengo Yekukanganisa Sisitimu inotarisa mutengo mutsva uchipesana neako Amazon Seller Central account yakaderera uye yakakwira mitengo.
Kana mutengo wako uchinge wasimbiswa, unonyorwa semutengo wako wazvino. Izvi zvinodzvinyirira zvese zvinoitika zvinoramba zvichikwira mumaawa makumi maviri nemana, mazuva manomwe pavhiki.
Tags: Amazon repricingamazon repricing chishandisosiringi mutengomutengo wepasimitengo yepamusoromitengo yepasiMitengo Yekukanganisa Sisitimurepricerrepricerexpress